ဒယ်နီ ၊ ဒယ်ပြာ သုံးသူတိုင်း သိထားသင့်သည့် အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးများ – Amara News
ဒယ်နီ ၊ ဒယ်ပြာ သုံးသူတိုင်း သိထားသင့်သည့် အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးများ
မိတ်ဆွေကောင်းတို့ အိမ်အများစုမှာ ဒယ်နီ ဒယ်ပြာ ဒယ်ခရမ်း တို့ကို တော်တော်များများ အသုံးပြုကြမှာပါ။ အလုံးပေါင်းမနည်း ပျက်လိုက် ဝယ်လိုက်နဲ့ ကျွမ်းကျင်စွာ သုံးနေကြတဲ့သူတွေရှိသလို ဝယ်ပြီးတာနဲ့ စနစ်တကျ တန်းသုံး
တတ်တဲ့ လူတွေလည်း တော်တော်များများ တွေ့ရပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေကောင်းတွေ အတွက် အသုံးတဲ့ စေမယ့် အချက်လေးတွေ ကျွန်တော် ထပ်ထည့် ပေးလိုက်ပါတယ်။1️. ဒယ်နီအများစု အားလုံးနီးပါးမှာ
မီးဆွဲအား 2000W ရှိပြီး မီးအတိုး အလျော့ လုပ်လို့ ရတာကြောင့် Extension Cord (ကြိုးခွေအဝိုင်းများ)နှင့် လုံးဝ မသုံးသင့်ပါဘူး။ 2️. အခုနောက်ပိုင်း ထွက်သမျှ ဒယ်နီတွေမှာ Auto cut-off system (အလိုလျောက်မီး
ဖြတ်ပေးတဲ့စနစ်) ပါလို့ အတိုးအလျော့ ဘုလေးကို အဆုံးထိမထားပဲ လိုသလို ချိန်သုံးရင် *ချက်နေရင်း ဆီပူမယ် ကြံရင်း အိုးက မပူတောရင်း* အဲလို ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်က ဟင်းချက်နေရင်း အမြဲတမ်း အိုးကို
ပူစေချင်တယ် ဆိုရင် အတိုးအလျော့ ဘုလေးကို အဆုံးထိ တင်ထားရင် အဆင်ပြေပြီး Auto cut-off system (အလိုလျောက်မီးဖြတ်ပေးတဲ့စနစ်) ကလည်း အလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး။ဒီနေရာမှာ အကြံပေးချင်တာက ဘုကို အဆုံး
ထိထားပြီး ဟင်းချက်ပြီးရင် ခလုတ်ပိတ် ပလပ်ဖြုတ်ပါ။ ဒါဆို ဘုကို အတိုးအလျော့မကစားပဲ အဆုံးမှာပဲ ထားခိုင်းတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းကျိုးက ဘုပျက်ခြင်း ကျိုးခြင်းမှ ကင်းဝေးနိုင်ပါပြီ။ မီးဆွဲအား ရှိနိုင်ပေမယ့် ကိုယ်က
ခိုင်ခံ့သော အထိုင်နဲ့ သုံးတယ်ဆိုရင် ဘာမှ စိတ်ပူစရာ မရှိပါဘူးနော်။3️. ဂျိုးကပ်တဲ့ အကြောင်းလေး ပြောပေးချင်ပါတယ်။
ရိုးရိုး အိုးဖြူဖြစ်ဖြစ် non-stick မကပ်တဲ့ အိုးမည်းဖြစ်ဖြစ် ဂျိုးကပ်တယ်လို့ ခဏ ခဏ ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှ ဝယ်သူကောင်းတွေဆီမှ အမြဲကြားရပါတယ်။ တကယ်တော့ အဓိက ဒီအချက်ကြောင့်ပါပဲ။ထမင်းပေါင်းအိုးတွေရဲ့ ထုံးစံမှာ
တစ်ခါ သိုးဖူးသွားရင် ဘယ်လောက်ဆေးဆေး နောက်ပိုင်း အသိုးလွယ်တာမျိုးကို ကြားဖူး တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ ဒါလည်း ဒီသဘောပါပဲ …အိုးဖြူဆို ကြော်လှော်တဲ့အခါ ကိုယ်က တစ်ခြား အလုပ်လုပ်နေလို့ ပစ်ထားမိပြီး ကပ်သွားပြီ ဆိုရင်
နောက်ပိုင်းလည်း ဘယ်လောက်ဆေးဆေး ကပ်ဖို့ အားသာနေပါပြီ ။ (ချွင်းချက်အနေနဲ့ တစ်ခါတစ်လေ အိုးက မီးမညီတာမျိုးကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်)4. နောက်တစ်ချက်က Non-Stick အိုးပါ။ မကပ်တဲ့အိုးဆိုပြီး ဘာလို့
ကပ်လဲ။ ဒါကကျတော့ ဒီလိုပါ။ non-stickအိုးကို သုံးတဲ့ အချိန်မှာ တော်တော် များများ က ထုံးစံအတိုင်း စတီးဇွန်း သံဇွန်းနဲ့ သုံးကြတာများပါတယ်။ (ကျွန်တော့် အမေအပါအဝင်ပေါ့) အဲဒီတော့ မွှေရင်း ခြစ်မိတဲ့ အခါကျတော့
ရေရှည် အဆင်ပြေစွာ သုံးနိုင်ပါတယ်။ (city mart, ocean တွေမှာ ဝယ်လို့ရနိုင်သလို ကျွန်တော်တို့လည်း တွဲရောင်းပေးဖို့ စီစဉ်နေကြပါပြီ)။5️. နောက် အိုးကပ်တာပြောရင်း တစ်ဆက်တည်း အိုးမှာကပ်နေတဲ့ ဟင်းတွေထမင်း
တွေကို ဘယ်လို လွယ်ကူအောင်ခွာမလဲ ဆိုတဲ့နည်းလေးပါ ပြောပေးပါ့မယ်။ လွယ်ပါတယ်။ ကပ်နေတဲ့ အိုးထဲကို ရေအနည်းငယ် ချိန်ထည့်ပြီး ပလပ်ပြန်ထိုး ခလုတ်ဖွင့်ပြီး ရေဆူတဲ့အထိ ထားလိုက်ရုံပါပဲ .. ဒါဆို ကပ်နေတာတွေ
အကုန် သူ့အလိုလို ကွာလာတာတွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။6️. ဒါဆိုတစ်ဆက်တည်း ဆေးကြောပုံနဲ့ ဆေးကြောပြီးနောက်ပိုင်း ဘယ်လို ရေရှည်ခံအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာလေးပြောပေးပါ့မယ်။ ဆေးတာကတော့ အဓိက အိုးတစ်ခုလုံးကို မ
မိတျဆှကေောငျးတို့ အိမျအမြားစုမှာ ဒယျနီ ဒယျပွာ ဒယျခရမျး တို့ကို တျောတျောမြားမြား အသုံးပွုကွမှာပါ။ အလုံးပေါငျးမနညျး ပကျြလိုကျ ဝယျလိုကျနဲ့ ကြှမျးကငျြစှာ သုံးနကွေတဲ့သူတှရှေိသလို ဝယျပွီးတာနဲ့ စနဈတကြ တနျးသုံး
တတျတဲ့ လူတှလေညျး တျောတျောမြားမြား တှရေ့ပါတယျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ကြှနျတေျာ့ မိတျဆှကေောငျးတှေ အတှကျ အသုံးတဲ့ စမေယျ့ အခကျြလေးတှေ ကြှနျတျော ထပျထညျ့ ပေးလိုကျပါတယျ။1️. ဒယျနီအမြားစု အားလုံးနီးပါးမှာ
မီးဆှဲအား 2000W ရှိပွီး မီးအတိုး အလြော့ လုပျလို့ ရတာကွောငျ့ Extension Cord (ကွိုးခှအေဝိုငျးမြား)နှငျ့ လုံးဝ မသုံးသငျ့ပါဘူး။ 2️. အခုနောကျပိုငျး ထှကျသမြှ ဒယျနီတှမှော Auto cut-off system (အလိုလြောကျမီး
ဖွတျပေးတဲ့စနဈ) ပါလို့ အတိုးအလြော့ ဘုလေးကို အဆုံးထိမထားပဲ လိုသလို ခြိနျသုံးရငျ *ခကျြနရေငျး ဆီပူမယျ ကွံရငျး အိုးက မပူတောရငျး* အဲလို ဖွဈတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျက ဟငျးခကျြနရေငျး အမွဲတမျး အိုးကို
ပူစခေငျြတယျ ဆိုရငျ အတိုးအလြော့ ဘုလေးကို အဆုံးထိ တငျထားရငျ အဆငျပွပွေီး Auto cut-off system (အလိုလြောကျမီးဖွတျပေးတဲ့စနဈ) ကလညျး အလုပျမလုပျတော့ပါဘူး။ဒီနရောမှာ အကွံပေးခငျြတာက ဘုကို အဆုံး
ထိထားပွီး ဟငျးခကျြပွီးရငျ ခလုတျပိတျ ပလပျဖွုတျပါ။ ဒါဆို ဘုကို အတိုးအလြော့မကစားပဲ အဆုံးမှာပဲ ထားခိုငျးတဲ့ သဘောဖွဈပါတယျ။ ကောငျးကြိုးက ဘုပကျြခွငျး ကြိုးခွငျးမှ ကငျးဝေးနိုငျပါပွီ။ မီးဆှဲအား ရှိနိုငျပမေယျ့ ကိုယျက
ခိုငျခံ့သော အထိုငျနဲ့ သုံးတယျဆိုရငျ ဘာမှ စိတျပူစရာ မရှိပါဘူးနျော။3️. ဂြိုးကပျတဲ့ အကွောငျးလေး ပွောပေးခငျြပါတယျ။
ရိုးရိုး အိုးဖွူဖွဈဖွဈ non-stick မကပျတဲ့ အိုးမညျးဖွဈဖွဈ ဂြိုးကပျတယျလို့ ခဏ ခဏ ကြှနျတျောတို့ဆိုငျမှ ဝယျသူကောငျးတှဆေီမှ အမွဲကွားရပါတယျ။ တကယျတော့ အဓိက ဒီအခကျြကွောငျ့ပါပဲ။ထမငျးပေါငျးအိုးတှရေဲ့ ထုံးစံမှာ
တဈခါ သိုးဖူးသှားရငျ ဘယျလောကျဆေးဆေး နောကျပိုငျး အသိုးလှယျတာမြိုးကို ကွားဖူး တှဖေူ့းကွမှာပါ။ ဒါလညျး ဒီသဘောပါပဲ …အိုးဖွူဆို ကွျောလှျောတဲ့အခါ ကိုယျက တဈခွား အလုပျလုပျနလေို့ ပဈထားမိပွီး ကပျသှားပွီ ဆိုရငျ
နောကျပိုငျးလညျး ဘယျလောကျဆေးဆေး ကပျဖို့ အားသာနပေါပွီ ။ (ခြှငျးခကျြအနနေဲ့ တဈခါတဈလေ အိုးက မီးမညီတာမြိုးကွောငျ့လညျး ဖွဈတတျပါတယျ)4. နောကျတဈခကျြက Non-Stick အိုးပါ။ မကပျတဲ့အိုးဆိုပွီး ဘာလို့
ကပျလဲ။ ဒါကကတြော့ ဒီလိုပါ။ non-stickအိုးကို သုံးတဲ့ အခြိနျမှာ တျောတျော မြားမြား က ထုံးစံအတိုငျး စတီးဇှနျး သံဇှနျးနဲ့ သုံးကွတာမြားပါတယျ။ (ကြှနျတေျာ့ အမအေပါအဝငျပေါ့) အဲဒီတော့ မှရေငျး ခွဈမိတဲ့ အခါကတြော့
Non-Stick ကနေ မ Non-Stick ဖွဈလာတဲ့ သဘောဖွဈပွီး အားရပါးရကပျတော့တာပါပဲ။တကယျတော့ Non-Stick က သဈသား ယောကျမ (သို့မဟုတျ) သူနဲ့တှဲသုံးရတဲ့ ဇှနျးတှေ ယောကျမတှေ ရှိပါတယျ။ အဲဒါလေးတှနေဲ့ဆို
ရရှေညျ အဆငျပွစှော သုံးနိုငျပါတယျ။ (city mart, ocean တှမှော ဝယျလို့ရနိုငျသလို ကြှနျတျောတို့လညျး တှဲရောငျးပေးဖို့ စီစဉျနကွေပါပွီ)။5️. နောကျ အိုးကပျတာပွောရငျး တဈဆကျတညျး အိုးမှာကပျနတေဲ့ ဟငျးတှထေမငျး
တှကေို ဘယျလို လှယျကူအောငျခှာမလဲ ဆိုတဲ့နညျးလေးပါ ပွောပေးပါ့မယျ။ လှယျပါတယျ။ ကပျနတေဲ့ အိုးထဲကို ရအေနညျးငယျ ခြိနျထညျ့ပွီး ပလပျပွနျထိုး ခလုတျဖှငျ့ပွီး ရဆေူတဲ့အထိ ထားလိုကျရုံပါပဲ .. ဒါဆို ကပျနတောတှေ
အကုနျ သူ့အလိုလို ကှာလာတာတှေ့ ရပါလိမျ့မယျ။6️. ဒါဆိုတဈဆကျတညျး ဆေးကွောပုံနဲ့ ဆေးကွောပွီးနောကျပိုငျး ဘယျလို ရရှေညျခံအောငျလုပျရမလဲဆိုတာလေးပွောပေးပါ့မယျ။ ဆေးတာကတော့ အဓိက အိုးတဈခုလုံးကို မ
ဆေးမိဖို့ပါပဲ။ အိုးအထဲပိုငျးထဲရထေညျ့ ဆပျပွာနဲ့ဆေးပွီးရငျ အိုးအပွငျကို ရစေိုဖော့ဖတျလေးနဲ့ တိုကျပေးရငျ အထူးအဆငျပွေ ပါတယျနျော။အိုးကို စိတျကွိုကျဆေးကွောပွီးပွီဆိုတာနဲ့ မီးပလပျပွနျထိုး ခလုတျဖှငျ့ပွီး အိုးမှာရှိနေ ကပျနေ
တဲ့ ရစေကျလေးတှေ အငှပွေ့နျသှားတဲ့ အထိ အပူပေးထားပါ ။ ခွောကျသှသှေ့ားပွီဆို ပွနျပိတျထားလိုကျပါ။ ဒါဆို နောကျတဈခါ ခကျြဖို့အတှကျ အဆငျသငျ့ဖွဈသလို ဓာတျလိုကျမှာ ကိုလညျးတှေးကွောကျနစေရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။
Previous Article အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် မြေနေရာအကျယ်ကြီးကို ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့သူ
Next Article မြန်မာက ကိုဗစ်ကူးစက်နှုန်း ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမြန်နေကြောင်း ထိုင်းပါမောက္ခပြော